15 Software Chat Fiidiyowga bilaash ah oo loogu talagalay goobta shaqada 2022 - Kiiky Wealth
Bogga ugu weyn 15 Software -ka Wada -sheekaysiga Fiidiyowga Bilaashka ah ee Goob -hawleedka 2022
Wadahadalka fool-ka-foolka ah hadda ma aha wax caadi ah sababta oo ah saameynta ba'an ee masiibada. Si kastaba ha ahaatee, dadku waxay u baahan yihiin inay shaqeeyaan si ay u dhisaan dhaqaale deggan. Iyada oo ay yaraadeen shirarka qolka guddiga jirku, software -ka sheekaysiga fiidiyaha oo lacag la'aan ah oo lacag -badan ayaa noqday beddel xooggan oo lagu qabto shirarka.
Sida laga soo xigtay HelVoip, tirakoobyada shirarka fiidiyaha iyo daraasadaha ku saabsan shaqada fog ee 2019 waxay muujinayaan in shaqaalaha fog ee adduunka uu kordhay 140% tan iyo 2005. Intaa waxaa dheer, shaqada fog waxay kor u kici doontaa 77% laga bilaabo 2019 illaa 2022, taas oo dhacday.
Tirakoobyadan, waxaad ku arki kartaa in softiweerka wada sheekaysiga fiidiyaha uu faa'iidooyin muhiim ah u leeyahay meherad, shirkad, iyo warshado kasta. Marka, maqaalkani wuxuu kuu soo bandhigi doonaa qaar ka mid ah barnaamijyada ugu wanaagsan ee fiidiyaha fiidiyaha ee bilaashka ah ee aad maanta isticmaali karto.
1. Kulanka Zoom
Kulammada daruuraha Zoom ayaa cirka isku shareeray sababta oo ah kordhinta shaqada guriga sababtoo ah dhibaatada Coronavirus. Marka loo eego tirakoobka gudaha ee shirkadda, 300 milyan oo qof oo adduunka oo dhan ah ayaa ka qeyb qaatay shirarka fiidiyowga Zoom maalin kasta inta lagu gudajiray Abriil 2020, marka la barbar dhigo 10 milyan oo isticmaale maalinle ah bishii Diseembar.
Isticmaalayaal badan ayaa ku qiimeeyay kaabayaasha ku saleysan daruuriga Zoom mid awood leh oo deggan. Wicitaanada taleefankooda iyo shirarkooduba waxay leeyihiin dhawaaq HD ah, tayada muuqaalka oo ka sarreeya, badanaana ka madax bannaan faragelinta. In kasta oo ay wali ka shaqeynayaan jebinta xogtooda, haddana waxay weli yihiin xulashada ugu sarreysa software -ka wada sheekaysiga fiidiyaha.
Barnaamijka Google Duo wuxuu u qaataa hab la mid ah FaceTime markaad tixgelinayso shaqadiisa muhiimka ah. On Google Duo, wicitaanada fiidiyaha ee u dhexeeya laba isticmaale ayaa suurtagal ah, iyo sidoo kale shirarka fiidiyaha ee u dhexeeya 8 qof, oo aad ugu dhow Facetime. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira xoogaa farqi ah oo u dhexeeya FaceTime iyo Google Duo.
Madalkan, Google waxay siisaa shaqadda 'garaaca garaaca' ee gaarka ah, taas oo u oggolaanaysa dadka isticmaala inay fiiriyaan fiidiyaha tooska ah ee fiidiyowga xiriirkooda kahor inta aysan ka jawaabin wicitaan kasta oo soo gala. Mid kale oo lagu daray ayaa ah in Google Duo kaliya loo heli karin aaladaha Android laakiin sidoo kale loogu talagalay macruufka.
Skype wuxuu ka koray inuu noqdo barnaamij wicitaan fiidyow oo lacag la'aan ah. Ka sokow inaad awood u leedahay inaad kula xiriirto isticmaaleyaasha kale adoo adeegsanaya wicitaan fiidiyaha, dalabka wuxuu kaloo leeyahay shaqooyin kala duwan oo cajiib ah. Tusaale ahaan, shaqada shirka, waxaa suurtogal ah in la isku xiro 25 isticmaale oo Skype ah si ay uga qeyb qaataan wada sheekaysiga kooxda waqti isku mid ah.
Dhammaan fariimaha ku jira Skype waa la tafatiri karaa ama la tirtiri karaa marka la diro ka dib. Intaa waxaa sii dheer, waxaa suurtagal ah in la miisaamo bandhigga si dadka isticmaala Skype ay u arki karaan shaashad kale meel fog. Gudbinta waxa ku jira shashadooda, isticmaalayaashu waxay si fudud u wadaagi karaan sawirada, dukumentiyada, bandhigyada, iyo wax ka badan.
4. Wajiga Wajiga
FaceTime waa codsi wada sheekaysiga fiidiyaha oo si gaar ah loogu dhisay aaladaha Apple (ie iPhone, iPad, iyo Mac). Iyada oo la ilaalinayo barnaamijyada kale ee Apple, howlaha FaceTime ee shaqooyinkiisu aad bay u yar yihiin - muujinta kaliya ee halkan lagu soo bandhigay waa taleefanka internetka (oo leh ama aan lahayn fiidiyow).
XIDHIIDHKA: Immisa Ayuu Sameeyaa Qareenka Cashuuraha?
Intaa waxaa sii dheer, sida Facebook Messenger, suurtogal ma aha in la sameeyo shir fiidiyow ah oo u dhexeeya in ka badan laba xisaab. Iyada oo ay taasi jirto, haddana, waxaa suurtogal ah in lagu martiqaado illaa 32 qof oo xiriir la leh wada sheekaysiga fiidiyaha.
Barnaamijka Facebook Messenger wuxuu ka caawiyaa dadka isticmaala inay abuuraan sheekaysiga iyo wicitaanada fiidiyowga oo leh ilaa 50 astaamood oo kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, tani ma aha khasaare sida marka la tixgelinayo caan Facebook. Dhab ahaantii, tani waa mid faa'iido leh, maadaama aad horeyba ugu xirneyd saaxiibbadaada iyo kuwa aad taqaan Facebook.
Khasaaraha ugu weyn, dhanka kale, waa xaqiiqda ah in isgaarsiinta aan si buuxda loogu qarin si caadi ah maadaama ay si joogto ah uga shaqeynayaan tan. Dhinaca kale ee adeeggan ayaa ah sumcadda Facebook ee liidata ee xagga ammaanka xogta.
Ciyaartooydu waxay ku kalsoon yihiin Discord inay tahay kheyraad weyn oo ay kula xiriiraan asxaabtooda xagga qoraalka, qaar badan oo iyaga ka mid ah ma oga inay tahay barnaamij wada sheekeysi fiidyow oo lacag la'aan ah. Intaa waxaa sii dheer, sababta oo ah waxay u oggolaaneysaa ku -qulqulka barnaamijka laftiisa, waa hab cajiib ah oo lagu ciyaaro qaar ka mid ah saaxiibbada, iyadoo loo sii daayo hal shaashad isticmaale kooxda inteeda kale.
Khilaafku wuxuu horay u sii socday si uu kor ugu qaado adeeggeeda ku-meel-gaadhka ah ee Go Live laga bilaabo ugu badnaan 10 qof illaa 50 qof si ku-meel-gaadh ah. Haddii aad u gudubto Nitro, oo qiimaheedu yahay $ 10 bishii, waxaad kor u qaadi kartaa tayada socodka si 1080p/60 fps.
WhatsApp waxaa loo bilaabay fariin qoraal ah laakiin waxa ay noqotay meel aad u isticmaali karto wicitaanada codka iyo muuqaalka. Intaa waxaa dheer, waxaad soo diri kartaa sawiro, muuqaalo, iyo fariimo cod ah.
Faa'iidada ugu weyn ee WhatsApp, si kastaba ha ahaatee, waa qaybinta ballaaran ee software-ka. Waxay leedahay aqbalid ballaadhan iyo korsasho taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah codsiyada loogu isticmaalka badan yahay adduunka. WhatsApp ma aha oo kaliya la wadaaga bartan dheeriga ah ee walaasheeda Facebook Messenger laakiin madalku waxa uu diyaar u yahay labada aaladaha IOS iyo Android.
Spike waxay soo saartaa xal wax ku ool ah oo loogu talagalay qaybta xirfadlayaasha leh qalabkeeda wicitaanka fiidiyoowga. Barnaamijku wuxuu ka caawiyaa kooxaha inay si hufan ula xiriiraan midba midka kale. Waxay isticmaali karaan khadadka isgaarsiinta sida wicitaanada taleefoonada, fariimaha, iyo wicitaanada fiidiyowga. Wicitaanada taleefoonka iyo muqaalka waxa si toos ah looga samayn karaa abka Spike.
XIDHIIDHKA: Sida Fudud Loogu Helo Robux 2022 | Talaabooyinka Fudud ee la Raacayo
Spike wuxuu gadaal gadaal u dhigayaa iskaashi kooxeed maadaama adeegsadayaashu ay wareejin karaan faylasha, ka qarin karaan farriimaha barnaamijka, oo ay hayaan kalandarka. Waxaad u adeegsan kartaa dalabkaan Windows iyo Mac, macruufka, iyo aaladaha Android maadaama sidoo kale loo adeegsan karo si madaxbanaan madal biraawsarkaaga internetka.
ICQ si fudud waxay ahayd adeeg farriin deg deg ah. In kasta oo ay heshay sumcad baahsan sida farriin deg deg ah, haddana lambarka soo dejintu wuu degay markii tartamayaal badani bilaabeen inay soo baxaan. Sida softiweer kale oo badan oo fiidyow bilaash ah, waxay leedahay astaamo gaar ah oo loogu talagalay sheekaysiga fiidiyaha ee Windows, Android, iyo iOS oo leh qarsoodi dhammaad-ilaa-dhammaad ah.
ICQ waxay leedahay isku ekaansho aad u weyn Skype. Tusaale ahaan, adeegsadayaashu waxay ka faa'iideysan karaan dalabka si ay wicitaanno ugu diraan taleefannada dhulka iyo shabakadaha mobilada lacag ahaan, dabcan, farriimaha qoraalka ayaa sidoo kale lagu soo diri karaa adeeggeeda farriinta degdegga ah.
Jitsi waa muuqaal loo sameeyay isticmaalayaasha leh walaacyo halis ah oo khuseeya sirta isgaarsiintooda. Dhammaan wicitaanada (labadaba leh iyo kuwa aan fiidyow lahayn) waa la siryay. Hawsha sheekadu waxa ay ka caawisaa isticmaalayaasha in ay dhaqaajiyaan sirta waxa ku jira sheekadooda.
Codsigan, adeegsadayaashu waxay si fudud u furaan wadahadal iyagoo gujinaya jiirka waxayna ku daraan dadka kale sheekada iyagoo u diraya xiriir. Sidaa darteed, tan iyo in ka sii badan ayaa ka dhigaysa mid ka mid ah barnaamijyada ugu wanaagsan ee fiidiyaha fiidiyaha ee bilaashka ah ee aad ka heli karto.
Tox ahaan adeeg ahaan wuxuu aad uga walaacsan yahay ilaalinta asturnaanta wada sheekaysiga isticmaaleyaasha. Waxay ilaaliyaan dhammaan isgaarsiinta dhex marta arjiga iyada oo loo marayo sir-dhammaad ilaa dhammaad. Habkan, waxay dammaanad qaadi karaan in qofna uusan heli karin oggolaanshaha waxyaabaha ku jira wadahadalka.
Tox wuxuu siiyaa dadka isticmaala ikhtiyaarka wadaagga desktop kaas oo laga heli karo Windows, macOS, Linux, Android, iyo aaladda iOS. Miiskaan, dadka isticmaala waxay ku beddeli karaan xogta xiriirka iyaga oo wata aqoonsi Tox oo gaar ah. Sidaa darteed, haddii aad raadineyso badbaado buuxda wicitaanadaada fiidiyaha, VoIP, iyo farriimaha deg dega ah, khaladaadkani waa inaysan kaa horjoogsan Tox.
Barnaamijyada Viber waxay leeyihiin hawlo badan. Qaar ka mid ah waxay u dhexeeyaan VoIP (oo leh ama aan lahayn muuqaal) iyo sidoo kale fariimaha degdega ah iyo awoodda wareejinta faylasha, iyo sida Skype, waxaa suurtogal ah in la isticmaalo Viber si loogu diro telefoonnada gacanta iyo kuwa guryaha ee lacag.
Viber waxay u haysataa sir-dhammaad ilaa dhammaad dhammaan adeegyadeeda (marka laga reebo wicitaannada dhulka iyo taleefanka gacanta). Qarsoodigani wuxuu u fadhiyaa meel si loo dammaanad qaado amniga isgaarsiinta iyo waxa ku jira. Dhinac weyn, Viber waxaa loo tixgelin karaa codsi awood leh wuxuuna weli yahay mid ka mid ah software -ka fiidiyaha fiidiyaha ee ugu fiican oo lacag la’aan ah.
13. Hangouts Google
Barnaamijka Google Hangouts ayaa guud ahaan loo arkaa inuu yahay isku day ay Google ku doonayso inay ku gasho suuqa fariimaha deg dega ah iyadoo u tartameysa WhatsApp. Barnaamij ahaan u shaqeynaya aaladaha Android iyo macruufka, Google Hangouts ayaa sidoo kale loo heli karaa sidii codsi shabakad, oo laga heli karo biraawsar.
XIDHIIDHKA: 10ka App ee Farriimaha ugu Fiican ee iPhone 2022
Hangouts waxay si xoog leh u bixiyaan ikhtiyaarka ah inay ku casuumaan isticmaaleyaasha aan diiwaangashanayn wicitaanka fiidiyaha; waxay markaas ka qayb qaadan karaan wada hadalka iyaga oo adeegsanaya biraawsarkooda. Laakiin markii la soo bandhigay Google Duo, barnaamijkan fiidiyaha fiidiyaha ee bilaashka ah ayaa ku socda dhulka.
Khadka waxa uu caawiyaa samaynta wicitaanada fiidyaha ee u dhexeeya labada isticmaale mid fudud. Laakin Line wuxuu dhaafi karaa calaamaddan sida meelaha kale. Madalkan waxa loo isticmaali karaa in lagu abuuro wakhti oo la wadaago sawiro, muuqaalo, iyo wax badan oo kale isticmaalayaasha kale, sidaa awgeed la dhiso shabakad bulsho oo yar oo lala xidhiidho.
Markii ay bilaabeen, Line waxay la kulantay dhaleeceyn culus oo ku saabsan la'aanta xogteeda amniga, laakiin dalabka ayaa hadda u muuqda inuu wax ka bartay khaladaadkiisa. Maanta, codsiga Khadka wuxuu hadda siin karaa isticmaaleyaashiisa sir-dhammaad ilaa dhammaad dhammaan noocyada isgaarsiinta.
WeChat waxay diyaar u tahay dhammaan nidaamyada hawlgalka ee caadiga ah iyadoo Linux kaliya aysan ku biirin xisbiga isu soo baxa. Hawlaha kala duwan ee arjiga waa mid aad u ballaaran oo kakan sida Khadka in kasta oo ay leedahay astaamo caadi ah sida shaqada sheekaysiga.
Hawlaha kala duwan ee aan caadiga ahayn ee WeChat ayaa si aad ah ugu xiran xaqiiqda ah in barnaamijka ay soo saartay shirkad Shiine ah oo leh dabagal dawladeed oo xooggan marka loo eego Maraykanka iyo Yurub. Sidaa darteed WeChat waa software -ka wada sheekaysiga fiidiyaha bilaashka ah iyo madal warbaahinta bulshada ee dadka Shiinaha ku nool si ay ula xiriiraan.
Doorashada software-ka sheekeysiga ee bilaashka ah waa gabi ahaanba go'aankaaga maadaama dhammaan goobahan ay leeyihiin shaqooyin isku mid ah oo kaa caawin kara inaad gaarto natiijooyin muhiim ah.
Markaad dooranayso, tixgeli yoolka aad rabto inaad gaadho, miisaaniyadaada softiweerka, iyo softiweerka leh interphase isticmaale iyo shaqeynta adiga kugu soo jiidanaya.
20 -ka Barnaamij ee ugu Wanaagsan Si Looga dhigo Wicitaannada Caalamiga ah Bilaash 2022
15 Siyaabood Oo Xalaal Ah Oo Lacag Looga Sameeyo Facebook 2022 | Tilmaan Buuxo
10 Siyaabood Oo Lacag Loogu Siin Karo Farriimaha Guurtida 2022 -ka
10-ka Buugaag ee Majaajilada ah ee ugu Qaalisan Adduunka | 2022
Buugaagta majaajilada ah waxaa sida ugu wanaagsan loogu yaqaanaa muujinta geesiga weyn iyo sheekooyinka supervillain. Inta badan buugaagta majaajilada ah aad bay qaali u yihiin. The…
10ka Bedel ee ugu Fiican ee Craigslist Personals
Dad badan ayaa u adeegsaday Craigslist Personals si ay dadka ugu raadiyaan kulannada caadiga ah nooc kasta ha ahaatee, goobtu waxay ahayd…
22 shay oo aanay Dadka Maskax ahaan Xoogan Samayn
Noloshu waxay leedahay hab lagu tijaabiyo awooddaada maskaxeed (oo sidoo kale loo yaqaan garashada shucuurta) marka ugu yar ee aad filayso…
Dhammaanteen waan jecelnahay kuwa xorta ah! Gaar ahaan marka ay tahay heer-sare-freebie. Waan kugu raacsanahay, lacag-la'aanta miisaaniyadeed ee hooseeya ayaa kara…
15ka wadan ee aduunka ugu qanisan sanadka 2022
Waxaa jira dalal badan oo loo arko inay yihiin kuwa ugu qanisan adduunka. Sidoo kale, inta badan dadka adduunka ugu qanisan…